ललितपुरमा डेंगो रोगी २० जना – newskiran.com
ललितपुरमा डेंगो रोगी २० जना
Posted By : newskiran.com Posted On : 2019-09-10 5:56 am Posted On : 2019-09-10 5:56 am
ललितपुरमा ११ जना डेङ्गुका विरामी भेटिएकोमा सोमबार उक्त संख्या बढेर २० जना पुगेको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीको रगतको परीक्षण गर्दा डेङ्गुको संक्रमण फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले बताए । जिल्लाको ६ स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगर र महालक्ष्मी गाउँपालिकामा डेङ्गुका विरामी भेटिएको छ ।
डेङ्गुविरुद्ध अभियान – खोज र नष्ट गर अभियान
डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलन नदिन ललितपुरमा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान शुरु भएको छ । जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी भेटिएपछि सरोकार भएका पक्षले उच्च सतर्कता अपनाएका हुन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका अनुसार भदौ ९ गतेदेखि जिल्लाभित्र लामखुट्टेको सम्भावित बासस्थानको खोजी गरी नष्ट पार्ने काम भएको छ । खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, ड्रम आदिमा जम्मा भएको पानी खाली गरी सफाइ गरिएको थियो ।
“सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित सम्भावित ठाउँको सरसफाइ पनि ग-यौँ” प्रमुख गेलालले भने।
जिल्लाका २ स्थानीय तहले पनि डेङ्गुविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न शुरु गरेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयले डेङ्गुको शङ्का लागेमा तुरुन्त अस्पतालमा जाँचको लागि आउन आग्रह गरेको छ । “शङ्कास्पद बिरामीलाई अल्झाएर नराखी तुरुन्त अस्पतालमा पठाउन अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अनुरोध गरेका छौँ”, डा. गेलालले भने ।
“लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै डेङ्गु रोकथामको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो”, महामारीजन्य रोगका फोकल पर्र्सन शंकर पौडेलले भने, “सर्वसाधारण स्वयं बढी सचेत हुन आवश्यक छ ।” स्वास्थ्य कार्यालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न, घर वरिपरि पानी जम्ने ड्रम, खाली बट्टा, पुराना टायर नराख्न, शरीर ढोक्ने गरी लुगा लगाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
डेङ्गु ‘एडिस एजिप्टाइ’ जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ । उक्त लामखट्टेले दिनमा मात्र टोक्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । डेङ्गुको सङ्क्रमणपछि एक्कासी उच्च ज्वरो आउने, रक्तश्राव हुने, टाउको, शरीर दुख्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् । डेङ्गुको खास उपचार नभएकाले लक्षणअनुसार औषधोपचार गरिन्छ ।
गत वैशाखमा सुनसरीको धरानमा देखिएको डेङ्गु अहिले ४२ भन्दा बढी जिल्लामा देखा परेका छन् । ४ जनाको मृत्यू समेत भैसकेको छ । सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता र सक्रियतासमेत बढाएको छ ।
यी हुन् लक्षणः
– डेंगुको प्रमुख लक्षण एक्कासि उच्च ज्वरो आउनु हो। यो ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ।
– आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग धेरै दुख्ने
– ढाड, जोर्नी तथा मांसापेशी दुख्ने
– रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षण पनि देखा पर्न सक्छ
– डेंगुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नुपर्छ।
– पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै स् गमला, फूलदानी, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रम, गाडीका काम नलाग्ने टायर आदिमा पानी जम्न नदिने
– पानीको ट्याङ्कीलाई लामखुट्टे छिर्न नदिने गरी छोपेर राख्ने
– फूलदानीमा रहेको पानी हप्तामा दुईपटक फेर्ने
– यस लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउने
– सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नु पर्छ, साथै साना केटाकेटिलार्य जुनसुकै समयमा पनि झुलभित्र सुताउने
– लमखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मल्हम दल्ने
– घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउने
– घर वरिपरि सफासुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी पुर्ने
यस्तो छ नेपालको मौसमी अवस्था
विदेशबाट फर्किएका ७० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ